Synephrine powder (94-07-5) hplc =98% | AASraw Fat Kurasikirwa powder
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Synephrine upfu
Rating: SKU: 94-07-5. Category: Fat Kurasikirwa poda
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika kuhutano hweSynephrine powder (94-07-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Molecular Kurema: 167.21
Raw Synephrine powder mu steroid cycle
Synephrine poda ndeye alkaloid inowanzoitika inoonekwa seinosimudzira uye nootropic nekuda kweiyo inokanganisa pakurasikirwa nehuremu uye nekuziva maitiro muuropi. Nomuzvarirwo Synephrine poda inowanikwa mune zvimwe zvirimwa nemhuka, kunyanya poda yeSynephrine inowanikwa mune zvekuwedzera zvekudya inoburitswa uye inogadzirwa kubva kuCitrus Aurantium Plant inowanzozivikanwa seBitter Orange kuburitsa.
Kuti utore mukana weiyo metabolic uye simba zvivakwa zveSynephrine poda, zviri nani kutora chinhu chekutanga mangwanani kana 15 - 30 maminetsi usati waekisesaiza. Pre-Workout uye kurasikirwa kwemafuta zvinowedzera zvine Synephrine poda inofanirwa kutorwa nemvura usati wadzidzira. Mushonga unonyanya kushanda ndeye 15 - 25 mamirigiramu pakushanda.
Ndezvipi zveZvino Ndinofanira Kutarisira kubva paRwy Synephrine powder
Kufanana nezvose zvakasikwa, usapindira zvisingatarisirwi zvakakosha zveSynephrin powder.
Yeuka kuti zvidimbu hazvisi kuvaka miviri yakanaka. Kuzvitsaurira pakudzidziswa kwakakwana uye kudya kunovaka kunoita.
Izvozvo zvakati, hezvino izvo zvamungatarisira kubva kuSynephrine powder supplementation:
Kuwedzera kwechidiki muhutachiwana hwemagetsi ako.
Kuwedzereka kuduku mune basa remafuta masero anogadzirisa izvo zvinodzivirira kuunganidza mafuta.
Kuwedzera zvishoma muhutano hwekudya, kana kuti 'mari inodhura' yekugadzirisa zvokudya.
Kana izvozvo zvisinganzwisisi zvose zvinonakidza kwauri, ndinonzwisisa. Ndiri kungoidza iyo sezvazviri.
Izvozvo zvakati, hazvirevi kuti haufaniri kuwedzera ne syneprhine. Zvinongoreva kuti iwe haufaniri kuwedzera chete neSyphrine powder kana iwe uchida chaizvo kuona kuvandudzwa.
Izvo zvinogona kutaurwa pamusoro pezvizhinji zvakasikwa zvinowanikwa.
Nevamwe, mumwe nomumwe, ivo vari kugadziriswa. Tora vakarurama pamwe chete, kunyange zvakadaro, nemigumisiro yakawanda inogona kuonekwa.
Semuenzaniso, kana iwe ukasangana nePynephrine powder nearingin uye hesperidin, iwe unogona katatu kukura kwemagetsi. Uye kana ukawedzera caffeine zvakare, migumisiro inowedzera kunyanya kutaurwa.
Mukutaura kwekurasikirwa kwemafuta, kana iwe wakatora awa mana ekuwedzera mazuva ose (uye kunyanya asati ashanda kunze), zvinonzwisisika kutora mamwe maundi 0.5 ekurasikirwa kwevakawanda kwevhiki.
Uye izvi zvakakwana kuva nehanya kana iwewo uchiramba uchidzidzisa zvakaoma uye udya zvakanaka.
(Ndinofanira kutaura kuti iwe unogona kurasikirwa nemafuta-uye akasindimara mafuta-kunyanya kana uchiwedzera yohimbine muchikamu.)
Kunze kwekugona kudzvinyirira kudya, Synephrine poda inoratidza zero humbowo hwekugona kupisa mafuta pachawo. Naizvozvo, Synephrine poda haigone kutariswa semafuta anopisa. Nekutora Synephrine poda ine mafuta anopisa zvakadaro, iwe unonzwa kuti unenge usina kuyedzwa zvishoma kuti utore mukati mezuva rako sezvo iwe uchagara uzere kwenguva yakareba uye uine zero zero chishuwo chekudya kupfuura zvaunogona kuita zvezuva nezuva.
Kungoita kuti muwedzere pamusika hazvirevi kuti unofanira kuitora kunyange zvakadaro. Synephrine powder achiri kuongororwa uye zvimwe zviitiko zvinoratidza kuti kana zvichishandiswa, zvinogona kuva nemigumisiro yemigumisiro, yakadai senyoka, kusuruvara, uye kunetseka nemanzwiro emuviri. Zvakanaka zvakare kurayira kuti sezvo Synephrine powder inofungidzirwa kuva inokurudzira, kuti avo vane kana vari pangozi yekurwara kwepamusoro yeropa, vane mhuri yehutano hwepfungwa kana kuti vakave nekurohwa, kuti iwe usingafaniri kutora chinhu ichi iyo inogona kutungamirira kuwedzerwa mungozi sezvo inokwidziridza chiyero chemwoyo zvishoma.
Saka, mubvunzo mukuru, iwe unofanira kutora Syneprhine here? Kutendeseka, kunze kwekuti iwe uri kushandisa iyo kubata chirwere chepachirwere chefungal, handioni chikonzero chekuti nei munhu achifanira kudya ichi chokuwedzera zvachose. Kana iwe usiri kurayirwa nechiremba kuti utore synpehrin, ingosiya kure nazvo sezvo njodzi dzakanyanya kunyanya kufunga nezvekugona mubairo inogona kukupa iwe. Kunyange zvazvo ini ndisingakwanisi kukuudza zvaunofanirwa uye haufaniri kutora, ndinotenda zvakasimba kuti nokupedza chigadzirwa ichi kana iwe usina kurayirirwa zvakare, kuti iwe unokwanisa kuguma kuita muviri wako kukuvadza kupfuura kunaka.
Kana iwe uchikomberedza paIndaneti kuti uwane mhinduro, uchawana nyevero inokurudzira iyo Synephrine powder inogona kuwedzera ngozi yekukwirira kweropa, kupera, kushaya mwoyo, kurohwa, uye 'mamwe madhara akaipa.'
Zvakanaka, zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvakaratidza kuti pfupa reSynephrin haiti kuwedzerwa ropa, uye tsvakurudzo inoratidza kuti inowanzochengeteka uye inoregererwa.
Ichokwadi ndechekuti kana iwe wakaita senge vanhu vazhinji, hausi kuzoona zvakanyanya kana iwe uchitora Synephrine upfu Mazhinji anorondedzera kuwedzera kushoma kwesimba pasina chero ezasi ezasi anowanzo sangana neanokurudzira (jitters, kuda kurutsa, kukurumidza kurova kwemoyo, nezvimwe. ).
Izvozvo zvakati, kana iwe uine chirwere chipi nechipi kana kutora mishonga ipi inogona kupesanidza kuwedzera ne Synephrine powder, taurira chiremba wako usati washandisa, hongu. Mienzaniso inokonzerwa nehutachiona hwemhepo, anti-depressants, uye HIV / AIDS.
Synephrine powder, kana kuti sezvinowanzozivikanwa, Bhitter Orange, igwenzi umo mashizha, michero nemichero yemichero zvinowanzogadzirwa uye zvinoshandiswa kuita mushonga uye inongedzo inoshandiswa kuita mafuta. Mafuta emunoramondi anogona kushandiswa paganda kuti abatsire kurapa zvirwere, zvakadai semakumbo uye vatambi vetsoka.
Kunyange zvazvo zvidzidzo zvakawanda zvichiri kuitiswa, kune humwe uchapupu hwakakwana hunoratidza kuti kana mumwe munhu achidya zvakaringana zvakanyanya zvearangi, ane simba rekudzivisa chido. Iyi ndiyo iyo Synephrine powder inoratidza zviratidzo zvekureruka pakati pevashandisi sezvo inongogadzira simba rinogara mukati memuviri kuita kuti mutengi anzwe akazara kwenguva yakareba uye anoderedza chero muedzo wekuchiva kana chido chekudya zvimwe zvekudya. Nokudya zvokudya zvishomanana, iwe unodya zviduku zvishoma, izvo zvinozoita kuti uwedzere kuora muviri kwechinguva.
Nzira yekutenga Siriphrine powder kubva kuAASraw
1.Kutaurirana nesu ne email yedu inobvunzurudza, kana mupepeti wepepeti we Skype mupepeti (CSR).